सं,क्रमण बारे फेरी पुनः नेपालमा आयो ड’रलाग्दो अपडेट – List Khabar
Home / समाचार / सं,क्रमण बारे फेरी पुनः नेपालमा आयो ड’रलाग्दो अपडेट
सं,क्रमण बारे फेरी पुनः नेपालमा आयो ड’रलाग्दो अपडेट
admin January 7, 2022 समाचार Leaveacomment 150 Views
सं’क्रमण बारे फेरी पुनः नेपालमा आयो ड’रलाग्दो अपडेट, नेपालमा पछिल्लो केही दिनयता सं’क्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो हप्ताको तुलनामा एक हप्तामा नेपालमा सं’क्रमणदर ०.९ प्रतिशतले बढेको छ ।
एक हप्तामा पीसीआर परीक्षणबाट देशभरबाट दुई हजार २३९ जना सं’क्रमित थपिएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै एन्टिजेन परीक्षण गर्दा २०९ जना सं’क्रमित थपिएको मन्त्रालयको तथ्यांकामा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै एक हजार ८११ जना सं’क्रमित सं’क्रमणमुक्त भएका छन् भने मृ-त्यु हुने सं’क्रमितको संख्या १३ रहको छ । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ३७० जना सं’क्रमित थपिएका छन् ।
बुधबार २४ घण्टामा २३९ जनामा सं’क्रमण पुष्टि भएको छ भने बुधबार कुनै पनि सं’क्रमितको मृ-त्यु भएको छैन । गत बुधबार २०९, बिहीबार २३५, शुक्रबार २२४, शनिबार ३४२, आइतबार २१३, सोमबार २९१ मंगलबार ३५५ थपिएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। नेपालमा सं’क्रमणभएदेखि अहिलेसम्म ४८ लाख ९४ हजार ५३३ जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ । जसमा आठ लाख ३० हजार दुई जनामा पृष्टि भएको छ । त्यस्तै आठ लाख ३९ हजार ५०४ जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ९६ हजार ३८३ जनाको पृष्टि भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
जसमा ८१ लाख ३ हजार १७६ सं’क्रमित सं’क्रमणमुक्र भएका छन् । नेपालमा सं’क्रमण मुक्तहुने दर ९८ प्रतिशत रहेको छ । संक्रमितमध्ये ११ हजार ६०१ जनाको मृ-त्यु भएको छ । नेपालमा मृ-त्युदर १.४ प्रतिशत रहको छ । नेपालमा पाँच हजार २२५ जना सं’क्रिय सं’क्रमित रहेका छन् । जसमा चार हजार ८५२ जना होम आ’इसोलेसनमा रहेका छन् । संस्थागत आइसो’लेसनमा ३७३ जना रहेका छन् । आईसीयूमा ८४ जना र भेन्टिलेटरमा १४ जना रहका छन् । नेपालमा खोप अभियान सुरु भएदेखि अहिलेसम्म दुई करोड ५५ लाख २१ हजार ६३९ मात्रा खोप लगाइएको छ ।
कुल जनसंख्या मध्ये ४८.४ जनाले एक मात्रा र ३५.६ प्रतिशतले पूर्णमात्रा खोप लगाएका छन् । त्यस्तै लक्षित जनसंख्याको ७३.९ प्रतिशतले एक मात्रा र ५४.२ प्रतिशतले पूर्णमात्रा खोप लगाएका छन् । अमेरिका, यूरोप, अफ्रिकी देशसँगै छिमेकी राष्ट्र भारतमा नयाँ भेरिएन्ट ओ’मिक्रोन फैलिँदै गएको छ ।
अमेरिकामा एकै दिनमा १० लाख जनामा सं’क्रमण पुष्टि भएको छ । नेपालमा पनि तीन जनामा नयाँ भेरिएन्ट ओ’मिक्रोन पृष्टि भएकोे छ । तेस्रो लहर नेपालमा नफैलियोस भनेर सरकाले पनि तयारी थालिसकेको छ ।
स्वास्थ्यसेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले देशभरका स्वास्थ्य कार्यालयलाई भा’इरसको ओ’मिक्रोन भेरियन्ट फैलन नदिन पूर्व तयारी गर्न आग्रह गरेको छ। तेस्रो लहरका विषयमा सरकार स’चेत रहेको मन्त्रालयका प्रवक्त डा. संगिता मिश्राले बताउनुभयो । साथै नयाँ भे’रियन्ट र नयाँ लहरबाट जोगिन सरकारले परीक्षण बढाउने, खोप लगाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको डा. मिश्राले बताउनुभयो ।
नयाँ भे’रियन्ट समाजमा नफैलियोस् भनेर नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य पीसीआरको तयारी गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । विदेशबाट आएका नागरिकको पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ आएमा तुरुन्त जिन सि’क्वे’न्सिङ गर्ने गरेको प्रवक्ता डा. मिश्रले बताउनुभयो । हवाई नाका र विभिन्न सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क राखेर टेस्ट गर्ने र यदि शं’कास्पद भेटिएमा क्वा’रेन्टिनमा राख्न निर्देशन दिइसकेको डा.मिश्रले जनकारी दिनुभयो ।
जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नभएसम्म नयाँ भे’रियन्ट समाजमा फैलने जोखिम रहेकाले सबैलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गर्न डा. मिश्रको सुझाव छ ।
Previous भारतमा एकै दिन १ लाख १७ हजार कोभिड संक्रमित, सयौंको मृत्यु, लकडाउनको तयारी
Next महान् ग्रह मंगलको राशि परिवर्तन: यी ४ राशिलाई अत्यन्त शुभ !